(L) လေ့လာမှု - ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများသည် 'အလွန်အမင်း' ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းလျှောက်လိုကြသည်
16 နှင့် 20 နှစ်ကြားယောက်ျားလေးတစ်ပဉ္စမသူတို့ "စစ်မှန်သောလိင်များအတွက်လှုံ့ဆော်အဖြစ် porn အပေါ်မှီခို" ခဲ့ကြသည်အရှေ့လန်ဒန်တက္ကသိုလ်သို့ပြောသည်။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်လေ့လာမှု 177 ကျောင်းသားများကိုစစ်တမ်းကောက်ယူနှင့်ယောက်ျားလေးများရာခိုင်နှုန်း 97 porn ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့၏အမျိုးအရာခိုင်နှုန်း 23 ရာခိုင်နှုန်း 13 သူတို့စောင့်ကြည့်အကြောင်းအရာ " ပို. ပို. လွန်ကဲဖြစ်လာသည်" ဖြစ်ပါတယ်အစီရင်ခံတင်ပြနေချိန်မှာသူတို့က, ကစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်မပေးနိုင်ဟုပြောသည်။
ရာခိုင်နှုန်းခုနစ်ခုသူတို့ကသူတို့ရဲ့ porn အလေ့အထထိန်းချုပ်မှုထဲကရတဲ့ခဲ့သည်ခံစားခဲ့ရဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီလိုကြောင်းပြောသည်။
အများစုကသူတို့ဆက်ဆံရေးကို, လစျြလြူရှုမိတ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ, သူတို့၏အမူအကျင့်စွဲ၏ရလဒ်အဖြစ်၎င်းတို့၏လူမှုရေးဘဝအပေါ်ခုတ်လှဲခဲ့ဟုဆိုသည်။
ဒေါက်တာမန်ဒါရောဘတ်, သီးသန့်ကြေးနန်း Wonder အမျိုးသမီးများနေ့မြင်လေ့လာမှုနေသူများကဖန်တီးသောသူတက္ကသိုလ်မှာစိတ်ပညာကထိက, said: "ငယ်ရွယ်ယောက်ျားလေးများ၏လေးပုံတပုံအကြောင်းကြောင့်သုံးပြီးရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်မတတျနိုငျပါပွီပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုအတွင်းကျိန်းသေရှိပါတယ်ဆိုလိုတာက ဤအုပ်စု။
"porn ၏ပိုပိုပြီးထိတွေ့မှုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာင်ကြောင့်အလွန်အကျွံင်; ကနေရာတိုင်းပါပဲ။ "
သူမသည်ရလဒ် "စိုးရိမ်ပူပန်" ပြောသည်ကြောင့်ငယ်ရွယ်ယောက်ျားလေးများအပေါ်ရှိခြင်းသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ပြောသော: "ငါကကလေးတွေကိုအတော်လေးထိခိုက်စေမယ့်သောကယ့်ကိုအစွန်းရောက်အမာခံပစ္စည်းရဲ့စဉ်းစားပါ။
သူတို့လိုမကြည့်ဘူး, သူတို့ထို့နောက်မိန်းကလေးများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းကြယ်များကဲ့သို့အပြုမူဖို့မြျှောလငျ့သောကွောငျ့ "ဒါဟာလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျိုးတန်ဖိုးထားဖို့ထိခိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပါမောက္ခ Matt ဖျော်ဖြေမှု, လီဗာပူးလ်တက္ကသိုလ်မှာဆယ်ကျော်သက်စွဲစိတ်ပညာရှင်, ဆက်ပြောသည်: "ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းစှဲဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့အထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကွောငျ့သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်းမည်သို့ပါပဲ။ "
သူသညျလူသားတို့မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အလျင်အမြန်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာကဲ့သို့သောအပျော်အပါး-inducing သွေးဆောင်ခြင်းငှါသူတို့အထိခိုက်မခံစေသည်ဖြစ်သောဦးနှောက်ထဲမှာ '' ဆုလာဘ်စင်တာ '' ရှိသည်ရှင်းပြသည်။
လူကြီးကပိုခက်မြီးကောင်ပေါက်သူတို့ရဲ့ရမ္မက်ဖိနှိပ်ရန်အဘို့အအောင်, သူတို့ရဲ့လယ်ပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်၌တည်ရှိ၏သည်အထိသို့သော် Self-ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းဦးနှောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုရင့်ကျက်မထားဘူး။
ဒေါက်တာရောဘတ်ကဆက်ပြောသည်: "တစ်ဦးစှဲလမျးသူဖြစ်လာစေရန်, သင်ကအရမ်းဆိုးရွားစေသည်သောပထမဦးဆုံးအစွဲတစ်ခု propensity ရှိသည်ဖို့ပေမယ့်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ဒါကြောင့်ထိတွေ့နေကြရှိသည်။
"Porn နေဆဲအင်တာနက်ပေါ်တွင်အများဆုံးမျှော်ကြည့်စကားလုံးများကိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ က DVDs နဲ့မဂ္ဂဇင်းများသို့မဟုတ်ပျော့-Core ဝက်ဘ်ဆိုက်များခဲ့ပေမယ့်ယခုကအားလုံးကိုအလွန်ခက်ခဲ-Core ရဲ့ကအခမဲ့အွန်လိုင်းင်ခြင်းမပြုမီ။ "
အဆိုပါလေ့လာမှုလည်း 80-16 အသက်မိန်းကလေးများရာခိုင်နှုန်း 20 porn မြင်ဘူးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရာခိုင်နှုန်း 10 သူတို့စောင့်ကြည့်အကြောင်းအရာပိုပြီးအစွန်းရောက်ဖြစ်လာသည်ဟုဆိုသည်စဉ်သူတို့၏အမျိုးအထဲကရှစ်ရာခိုင်နှုန်း, သူတို့ကစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်နိုင်ဘူးခံစားရတယ်။
ယောက်ျားလေးများသည်အဓိကအားဖြင့်ပျော်မွေ့ဘို့ကစောင့်ကြည့်နေစဉ်, မိန်းကလေးများသိချင်စိတ်ထဲကသို့မဟုတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသင်ယူမှုအဘို့အညစ်ညမ်း watched ။
အဆိုပါသုတေသနအပြီးလာ တစ်ဦး NSPCC လေ့လာမှုက The Daily Telegraph သတင်းစာရဲ့အားဖြင့်ပြန်တမ်း, ကျောင်းကျောင်းသားတစ်ဦးကိုတတိယအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းလူငယ်များတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ပြုမူရန်ရှိသည်ဘယ်လိုဆိုထားသည်ယုံကြည်ပြသခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကြေးနန်း Wonder အမျိုးသမီးများနေ့ သာ. ကောင်း၏လိင်ပညာပေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုပြီးခဲ့သည့်လကစတင်ခဲ့သောကလေးငယ်များအင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်မသင့်လျော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသို့ဖိအားလျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်း, ခေတ်မီခံရဖို့ကျောင်းများတွင်လိင်ပညာရေးကိုခေါ်ခဲ့သည်။
လိင်ပညာရေးအပေါ်လက်ရှိစာသင်ခန်းလမ်းညွှန်ချက်များဘရော့ဘန်းနှင့်မိုဘိုင်းအင်တာနက်တိုးတက်မှုနှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းရာအရပျကိုယူသောအွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏ကျယ်ပြန့်တိုးချဲ့အသိအမှတ်ပြုရန်ပျက်ကွက်, 2000 ကတည်းက updated ကြပြီမဟုတ်။
အဆိုပါသုတေသနတစ်ဦး Channel ကို4မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အပေါ်မိတ်ဆက်ပြသပါလိမ့်မည် အဆိုပါဦးနှောက်အပေါ် porn 30pm မှာတနင်္လာနေ့ 10th စက်တင်ဘာလရက်တွင်ရီးရဲလ်လိင်များအတွက် Channel ကို4ရဲ့ကင်ပိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်။
Radhika Sanghani စက်တင်ဘာ 2013 ခြင်းဖြင့်မူရင်းဆောင်းပါး
ကြေးနန်း Wonder အမျိုးသမီးများ 21st ရာစုသို့လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးပညာရေးကိုရောက်စေဖို့ဒေးဗစ်ကင်မရွန်တိုက်တွန်း, ပိုကောင်းတဲ့လိင်ပညာရေးမဲဆွယ်နေပါတယ်။ မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသနားခံစာ Sign change.org/bettersexeducation သို့မဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] @TeleWonderWomen, Twitter ကို #bettersexeducation အပေါ်ကင်ပိန်းကိုလိုက်နာပါ